Tokony hofongorana ve ny endrika Web 2.0? | Martech Zone
Alahady, Novambra 25, 2007 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Elliot Jay Stocks dia miantsoantso ho an'ny mpamorona… avelao ny fijery Web 2.0 ary miadia amin'ireo mpanjifanao manery azy io.
NAOTY: Aza hadino ny mitsidika Tranokalan'i Elliot, mahavariana tokoa ny endrika.
Tsy miombon-kevitra amin'i Elliot aho fa tokony horavana. Miasa eo amin'ny sehatry ny Marketing, fantatrao fa misy toe-tsaina andiany iray hamolavola. Tian'ireo orinasa Apple manana paosy lalina ary manana fanantenana ny genius famoronana mifandraika amin'ny marika misy azy ireo. Manantena ny mpanjifa fa ny volavola mifandraika amin'ny vokatra Apple, fonosana ary marketing dia hamotika ny tany vaovao. (Afa-tsy ireo doka afara mainty misy jiro mamiratra amin'ny lafiny iray amin'ny mpitondra teniny… heveriko ho mahatsikaiky izany).
Ny sisa amin'ireo orinasa dia mety mifanaraka amin'ny fitarihana. Toy ny lamaody manaraka ny fironana, dia toy izany koa ny famolavolana. Ny 'andiany' dia mankasitraka ny hatsarana hita maso izay manome famantarana fa misy ifandraisany amin'ny fironana na teknolojia manokana. Rehefa mahita rindranasa vaovao toa ahy aho Mixx or rssHugger, alohan'ny handinihako ilay rindranasa dia tratry ny jery todika aho fa fampiharana natsangana tamin'ny haitao vaovao indrindra io.
Zava-dehibe ny maha-izy azy sy ny fahaiza-mamorona, fa rehefa manao jeans pataloha tongotra ny olon-drehetra ary miseho eo ambanin'ny lakolosy ianao dia hanontany avy hatrany ny fahatsaranao lamaody ny olona. Mety na tsy mety, izany no toetran'ny olombelona. Amin'izao vanim-potoana iainan'ny mpanjifa haingana izao MySpace ny Facebook, na Twitter ny Tumblr, zava-dehibe ny hanahafan'ny endrika anao fa naka ny farany ianao lamaody ao amin'ny tranonkala.
Manaja ny hevitr'i Elliot amin'ny maha-mpanakanto manan-talenta ahy sy mpamolavola tokana ahy aho, saingy tiako ny orinasa tsy hanafoana ny famolavolana Web 2.0. Na i Elliot aza dia miaiky fa misy antony marobe hanarahana ny omby. Izahay sy Elliot dia miombon-kevitra amin'ny tena fanamby: Ahoana ny fomba hiasa ao anatin'ny fetra amin'ny hatsarana Web 2.0 ary mbola mivoaka ho toy ny original ihany. Ary raha mitady inona ny singa ilaina, Elliot dia manangana fampisehoana mahafinaritra miaraka amin'ireo estetika rehetra mifandraika amin'ny famolavolana Web 2.0!
Tags: tahiry elliot jay2 web2.0 webMalagasy famolavolana
Ahoana raha nitokona ireo bilaogera?
25 Nov 2007 tamin'ny 3:50 PM
Mpamorona myopika sy tia tena mahazatra. Namaky ny lahatsorany aho avy eo ary nijery ny famelabelarany izay nanantena ny hahazo fahitana tena izy nefa nahita lahatsoratra iray izay nitory tamin'ny amboarampeo mpihaino FOWD azy ihany; vondrona iray manana ny fari-piainan'izy ireo te hanana fahalalahana mamorona nefa tsy mila miahiahy momba ny tanjon'ny orinasa. Ny mampihomehy dia ilay kinova Web 2.0 an'ny masoivohon'ny doka izay mifantoka amin'ny fahazoana loka famoronana fa tsy mifantoka amin'ny fitondrana vola miditra amin'ny faran'ny mpanjifany.
Hifantoka bebe kokoa amin'i Jakob Nielsen aho ary Lalàn'i Nielsen: "Matetika ny olona mampiasa tranokalan'olon-kafa matetika kokoa noho ianao (noho izany ny fampifanarahana ny tranokalanao amin'ny tranokala hafa dia hampitombo ny fampiasana ary noho izany dia manampy anao hahatratra ny tanjon'ny orinasao.
25 Nov 2007 tamin'ny 3:51 PM
Jereo, ny fanamby dia ny maro tsy mpanao endrika manao ny endrik'izy ireo manokana .. Ny sasany amintsika dia te ho afaka hamolavola tranokala toa an'Andriamatoa Stocks, na izany aza tsy ampy ny fahaiza-manao sy / na ny tetibola hanaovana izany.
Rehefa miresaka momba ny “Web 2.0” dia tsy voalaza ny famolavolana eny, na izany aza, azontsika daholo ny endriny: zavatra manjelanjelatra, tsipika, sisin-dambolana, taratra ary famirapiratana ivelany… (heveriko fa voasaroko daholo koa izy ireo!) . Azo antoka, ny rehetra dia mitsambikina ao anaty sambo ary mandeha miaraka aminy, na izany aza, raha mijery ny fomba hafa isika, dia tavela miaraka amina miloko mena (izay mety hiara-miasa na tsy hiara-miasa akory aza), tsy fahampiana lalina, ary tranokala mampalahelo na ratsy kokoa, clip-art…
Ny fijerin'ny tranonkala 2.0 dia ho antsika sisa izay mahatakatra fa tsy manana ny fahaizan'ilay mpamorona tena mahay isika, kanefa mahatakatra ny lanjan'izany amin'ny fanaovana ezaka kely ao aminy ankoatry ny fanovana ny lahatsoratra amin'ny lohahevitra WordPress default…
25 Nov 2007 tamin'ny 9:02 PM
Ny iray amin'ireo zavatra lehibe aobut WordPress (ok. Momba ny CSS) dia ny mampisaraka ny endrika sy ny atiny. Midika izany fa azonao atao ny misintona lohahevitra namboarina tsara tarehy ary aza manahy momba ny famolavolana be loatra avy eo.
Izaho aloha dia manandrana mandeha amin'ny fomba minimalistic, ary milalao amina lohahevitra mifantoka amin'ny karazana.
25 Nov 2007 tamin'ny 8:58 PM
Elliot dia manana lohahevitra WordPress tsara indrindra eritreretiko tsara hitako. Mahagaga sy manentana ny fanahy.
25 Nov 2007 tamin'ny 9:20 PM
Manaiky aho, modifoo! Menatra aho amin'ny volavolako rehefa mijery ny iray efa voavolavola tsara toa azy!